Ndeipi mibvunzo inofanirwa kupindurwa nemwana wangu (uye ndeipi inofanirwa kukwanisa kubvunza)? | Kudzidziswa Kwekuziva
Iyi tafura inoratidza hunyanzvi hune hukama nezvakakosha pfungwa zvemutauro. Ehezve, kune akasiyana akasiyana akasarudzika pakati pevana. Nekudaro, musiyano wakakura kwazvo kubva pamatanho aya inogona kuve chikonzero chekubvunza nyanzvi.
Mibvunzo yaanofanira kukwanisa kupindura
Mibvunzo ine "kupi". Muenzaniso: bhora riripi? (anopindura achinongedzera kumufananidzo webhora riri mubhuku)
Mibvunzo ne "chii icho?" zvine chekuita nezvinhu zvinozivikanwa
Hongu / kwete pindura mibvunzo, kugutsurira kana kudzungudza musoro wako
Inoratidza zvinhu zvinotsanangurwa, semuenzaniso zvinoratidza ngowani kana uchibvunza "Unoisei pamusoro wako?"
Iyo inopindura yakapusa mibvunzo nezve chii, sei, riini, kupi uye nei
Iyo inopindura mibvunzo yakaita "Unoitei kana iwe uchinzwa kutonhora?"
Inopindura mibvunzo yakaita sekuti "Kupi ...", "Chii icho?", "Uri kuitei ....?", "Ndiani ...?"
Anopindura kana kunzwisisa mibvunzo yakaita se "Unoziva here ...?"
Anopindura mimwe mibvunzo yakaoma ne "Ndiani", "Sei", "Kupi" uye "Sei"
Anopindura mibvunzo ine "Unoitei kana?", Senge "Unoitei kana kuchinaya?"
Iyo inopindura mibvunzo ine chekuita nebasa rezvinhu, senge "Chii chinonzi chipunu?", "Sei tine shangu?"
Anopindura mibvunzo ne "Rini"
Anopindura mibvunzo ine "Vangani?" (kana mhinduro ikasapfuura ina)
Mibvunzo yaanofanira kukwanisa kubvunza
Kutanga kushandisa fomu yekubvunzurudza, uchitanga na "Chii icho?"
Shandisa iyo inokwira kukanda
Anobvunza mibvunzo - kunyangwe akareruka - ane chekuita nezvaanoda, semuenzaniso "Kupi bhisikiti?"
Inobvunza mibvunzo ne "Kupi?", "Chii?", "Anoitei?"
Inobvunza mibvunzo yakapfava ne "Sei?"
Kana uchibvunza mubvunzo shandisa "Chii", "Kupi", "Rini", "Sei" uye "Naani"
Inobvunza mibvunzo ne "Is a / a ...?"
Inobvunza mibvunzo inotevera ichishandisa chimiro chakakodzera chegirama: "Unoda here ..." + isingagumi, "Unogona ...?"
mwana anonzwisisa mibvunzo, mwana pindura mibvunzo, mibvunzo yemwana, mutauro, kusimudzira mutauro
Ndeipi mibvunzo inofanirwa kupindurwa nemwana wangu (uye ndeipi inofanirwa kukwanisa kubvunza)?2020-11-052020-12-28http://www.trainingcognitivo.it/wp-content/uploads/2017/08/nuovologo_87e9aa904327d53301f73f9191e17e49.pngKudzidziswa kwekuzivahttps://www.trainingcognitivo.it/wp-content/uploads/2020/11/ezgif-3-fd7065ffb83c.png200px200px
Mangani mazwi anofanirwa kuziva mwana wako (zvinoenderana nezera)mutauro
Simbisa kushanda ndangariro kunatsiridza mutauroMutauro, kushanda ndangariro